Kugovanisa whitespace yako zvine musoro. Iyo nzvimbo mune yega yega barbar inofanira kunge yakaenzana kubva pane zvako zvemukati. Iyo nzvimbo pakati pezvinyorwa inofanira kuve inopfuura iyo nzvimbo pakati pemusoro uye posvo yacho ndeyayo. Iwo mafonti ezvako zvemukati anofanirwa kuve akakura pane mafonti eblog rako ezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Whitespace ndiyo kiyi kune yakanaka saiti ine kuverenga kukuru.
Shandisa misoro, oneka, akatsveyamiswa uye zvinyorwa zvine mabara zvakanaka. Chinyorwa chine zvakanyanyisa kushandiswa chinyorwa chakanyatsobvisa pachiitiko uye chinoderedza kukosha kwemitsara yakashinga. Ipa vashandisi nematurusi ebhizimusi kuti vagadzirise ruzivo rwavo rwekuverenga. Mabulleted zvinyorwa zvinopa zvirimo zviri nyore kuverenga. Chinyorwa chakadai seichi chinopa kutarisa kwepfungwa kune muverengi.